Iindaba -Ukucinywa komphezulu wentsimbi kunye nokucoca ubushushu kunyango kuqhutywa bubushushu
Umbhobho wentsimbi ophelisa ubushushu kunye nokunyanga ubushushu kunyanzeliswa ukuba kwenziwe ngokufudumeza ubushushu okanye ukufudumeza ilangatye. Iiparameter eziphambili zobuchwephesha bubulukhuni bomphezulu, ubulukhuni bendawo kunye nobunzulu bokusebenza kobunzima bokuqina. Ukuvavanywa kobulukhuni kunokusebenzisa i-Vickers yokuqina komvavanyi, kunokusebenzisa iRockwell okanye ukuqina kweRockwell. Ukukhethwa kwamandla ovavanyo (isikali) kunxulumene nobunzulu bomaleko obomeleleyo kunye nobulukhuni bomphezulu wombhobho odibeneyo. Apha kubandakanya ubulukhuni abathathu.
Iimpawu zeMichiza: ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nobushushu obuphantsi, ukumelana ne-asidi, i-alkalinity, ukumelana ne-oxidation, njl .;
Ukusebenza kwenkqubo: ukolula intambo, ukujonga ukwaphuka, ukugoba okuphindaphindayo, ukugoba umva, ukubuyisa umva, ukujikajika, ukujija, ukukrwitsha, ukuthambisa, ukwandiswa kwendandatho, ukolula umsesane, umbutho wemicroscopy, uvavanyo lokutya, uhlalutyo lwe-metallographic, njl .;
Uvavanyo olungonakalisiyo: Uvavanyo lwe-X-ray olungonakalisiyo, i-electromagnetic ultrasonic, i-ultrasonic, uvavanyo lwe-eddy lwangoku, uvavanyo lokuvuza kokuvuza kwemagnethi, uvavanyo olungena ngaphakathi, uvavanyo lwencindi yemagnethi;
Iipropati zoomatshini: ukuqina kwamandla, uvavanyo lwempembelelo, inqaku lesivuno, ubude emva kokuqhekeka, ukunciphisa indawo, isalathiso sobulukhuni (Rockwell hardness, Brinell hardness, Vickers hardness, Leeb hardness, Webster hardness);
Ezinye izinto: ulwakhiwo lwensimbi, ukubandakanywa
Uhlalutyo lokuthelekisa, ukuchongwa kwezinto, uhlalutyo lokusilela, uhlalutyo lwecandelo, uhlalutyo lweekhemikhali
Uhlalutyo lokusilela: uhlalutyo lokophuka, uhlalutyo lomhlwa, njl.
Uhlalutyo olusisiseko: ukufumanisa ngokuchanekileyo kunye nohlalutyo lwe-manganese, ioksijini, i-nitrogen, ikhabhoni, isalfure, i-silicon, isinyithi, i-aluminium, i-phosphorus, i-chromium, i-vanadium, i-titanium, ikopolo, i-cobalt, i-nickel, i-molybdenum, i-cerium, i-lanthanum kwizinyithi, ii-alloys kunye neemveliso zazo , kunye nentsimbi engenasici, iCalcium, i-magnesium, i-zinc, i-tin, i-antimony, i-arsenic kunye nezinye izinto ezenziwe ngesinyithi kunye nomxholo;